Filtrer les éléments par date : dimanche, 06 janvier 2019
dimanche, 06 janvier 2019 19:25
Toamasina: Polisy maty notifirin'ny jiolahy
Polisy lahy iray, avy niasa ka handeha hamonjy fodiana tao amin’ny trano fonenany ao Tanamborozano, tsy lavitra ny sekoly Stella Maris, no notifirin'ny jiolahy tamin’ny kalaky ka maty tsy tra-drano.
Ny angom-baovao no nahalalana fa avy niasa ary mbola nanao fanamiana ilay polisy izao lavon’ny bala izao.
Raha ny tombana vonjy maika, dia jiolahy handeha hanatanteraka asa ratsy no nifanehatra tampoka tamin'ny lalankely. Ilay polisy izay nandeha moto. Noheverin’ireo jiolahy handeha hisambotra no anton-dia ka izao niafara tamin’ny fitifirana izao.
Nandalo teo amin’ny tanany ny bala, dia nivoaka tany an-damosiny. Tsy nisy sahy nivoaka ny manodidina raha tsy efa nazava ny andro.
dimanche, 06 janvier 2019 18:58
Madagasikara: Ivotoeran'ny adin'ny firenena vaventy
Isika Malagasy mihevitra foana fa raharaha tokantranontsika irery ity Firenena Malagasy ity amin'izao.
Ny fifidianana ho Filoham-pirenena hatreto, raha tsy ovaina io famatsiana ara-bolan'ny fikarakarana ny fifidianana, izay miankina tanteraka amin'ny vahiny, ny vola ampiasain'ny Kandida, izay mandeha hatrany amin'ny 1 000 miliara ariary, ampahefatry ny tetibolam-pirenena no ampiasain'ny kandida lehibe, dia ny vahiny hatrany izany no hibaiko ny fifidianana, ny vokam-pifidianana, ny fanapahana rehetra rehefa lany ilay kandida.
dimanche, 06 janvier 2019 10:27
RDC: Ahemotra ny famoahana ny vokam-pifidianana
Raha anio alahady no nokasaina amoahan'ny CENI ny vokam-pifidianana vonjy maika ny fifidianana filoham-pirenena any Kongo, dia vao 50% n'ny vokam-pifidianana no tonga eo amin'ny CENI, ka dia tsy maintsy mihemotra ny famoahana ny vokatra.
Tsy mazava amin'ny maro moa ny nampiasana ilay "machine à voter", nefa dia mbola manangona ireo bileta narotsaka anaty vata fandatsaham-bato indray. Ilay machine à voter tokoa manko, rehefa vita ny safidy amin'ny fikasihana ilay écran machine à voter, dia mamoaka bileta misy ny safidy izy, dia iny bileta iny indray no alatsaka anaty vata. Dia miverina toy ny fifidianana misy bileta rehetra, manisa vato, manao PV, mampiakatra vokam-pifidianana.
Hatreto dia tsy mbola mandeha ny internet any an-toerana, ary ny mpanao gazetin'ny RFI dia nody any Paris, satria dia tsy mahazo mandeha any Kongo ny onjam-peon'ny Radio France Internationale.